I-Orlistat kunye neTadalafil yomenzi wepowder mveliso-CMOAPI
Iimveliso ezikumgangatho ophezulu kufuneka zibe ngqongqo
Umzi-mveliso wethu yi-GMP, cGMP
I-ISO: 9001: 2008 iqinisekisiwe.
Sinikezela nge-CMO kunye ne-API yendawo enye yokumisa
Iimpawu ezimbi: R&D, imveliso, ukwenziwa
ing kunye nentengiso.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., KUNOKUSETYENZISWA. eyasekwa ngo-2007, yinkampani yeshishini lobuchwephesha ebandakanyekayo kuphando, uphuhliso kunye nentengiso yemveliso ekrwada. Iimveliso zenkampani: I-Lorcaserin, abalamli beLorcaserin, i-orlistat, iSesamol, i-tadalafil kunye nabaphakathi be-tadalafil, njl. izixhobo, iiseti ezingama-60 ze-HPLC, iiseti ezingama-20 ze-chromatographs zegesi, i-LCMS, i-ELSD, i-ultraviolet kunye ne-spectrometers ezibonakalayo, i-frozer driers kunye nezinye izixhobo eziphambili. Idlulile i-ISO14001, i-ISO9000 kunye ne-DMF yokuqinisekiswa ngokudityaniswa kunye nokufunyanwa, kwaye inenkqubo yolawulo lomgangatho iyonke.
Inkampani yethu iqeshe inani leengcali eziphezulu ezinemvelaphi yophando yamazwe aphesheya, kwaye inamandla amakhulu kwizifundo zelebhu, kuvavanyo lokulinga kunye nemveliso ehambileyo. Kukho oogqirha abali-11 nangaphezulu kweenkosi ezingama-46, izazinzulu, kunye neenjineli kwinkampani yethu Isiseko semveliso ye-API sigubungela indawo engaphezulu kwama-40 mu.The isityalo samayeza esiGMP sigubungela indawo engaphezulu kwe-160mu kwaye sinendibano yocweyo yale mihla, elebhu yolawulo kunye nezakhiwo zokufumanisa. , igumbi lokulala, iindawo zokuhlala, kunye nokunye.
"I-CMOAPI yi-ISO 9001: 2008 eqinisekisiweyo kwaye yonke imisebenzi yayo yeshishini ilandelwa ngokuthe gabalala yimigangatho yolawulo lomgangatho wamazwe jikelele."